कसले दुखायो सन्ध्या केसीको मुटु ? « Ramailo छ
कसले दुखायो सन्ध्या केसीको मुटु ?
पुष १४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘हेप्पी न्यू ईयर’ को ‘स्याड भर्सन’ को गी रिलिज गरिएको छ । ‘मुटु’ बोलको गीतको भिडियोमा नायिका सन्ध्या केसी, कुशल थापा र पुकार गौतमले एक अर्कालाई मिस गर्दैछन् । भिडियो यस्तो बनेको छ :
किरण माइकलको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा सनुप पौडेलको स्वर छ । देवकुमार श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘हेप्पी न्यू ईयर को सम्पूर्ण जसो छायाँकन अस्ट्रेलियामा गरिएको हो । फिल्मलाई रती थापाले निर्माण गरेकी हुन् ।